Xareed Cali oo dalbaday in ciidamo AMISOM la geeyo xarunta baarlamaanka Galmudug (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xareed Cali oo dalbaday in ciidamo AMISOM la geeyo xarunta baarlamaanka Galmudug (AKHRISO)
Waxaa aad u kacsan xaaladda siyaasadeed ee ka jirta maamulka Galmudug, iyadoona qeyb ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay wadaan mooshino xilka looga qaadayo madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed iyo guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa la sheegayaa inuu hogaaminayo kacdoonka siyaasadeed ee ka taagan magaalada Cadaado, waxaana laga cabsi qabaa in ciidamada ay farageliyaan islamarkaana ay joojiyaan kulamada xildhibaanada qaarkood ku leeyihiin magaaladaas.
Warqad qoraal ah uu guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir maalintii shalay u diray madaxda Midowga Afrika ee AMISOM ayaa ku codsaday in ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Cadaado ay ilaaliyaan ammaanka guud ee xarunta ay shirayaan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug.
Qoraalka oo ku qoran afka Ingiriiska ayuu guddoomiye ku-xigeenka ku sheegay inay ka war heleen in qas-wadayaal ay doonayaan inay carqaladeeyaan fadhiyada xildhibaanada baarlamaanka Galmduug ay ku yeelanayaan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Hadaba nuqul ka mid ah qoraalkaasi oo nasoo gaaray ayaa u qornaa sida hoos ku xusan:-